Hevitra ara-nofo | Reef Resilience
Tanjona lehibe iray amin'ny ezaka fanatsarana ny isam-batan'olona ny fiantohana ny fahasamihafana amn'ny haran-dranomasina. Ny fahazoana olona miavaka amin'ny fototarazo ary manara-maso ireo karazan'aharan-dranomasina amin'ny akanin-jaza sy mandritra ny famoahana dia zava-dehibe amin'ny fahombiazana maharitra amin'ny ezaka famerenana amin'ny laoniny ary ny vahoaka haran-dranomasina naverina amin'ny laoniny. Zava-dehibe indrindra izany ho an'ireo karazana haran-dranomasina izay tandindomin-doza na tsy fahita firy, satria azo inoana fa efa nampihena ny fahasamihafana ara-pirazanana izy ireo ary mety tsy hamerina amin'ny fomba mahomby ny firaisana ara-nofo, manala ny mety ho fifangaroana fototarazo vaovao mipoitra voajanahary.
Ny teny fototra dia faritana eto ambany ho toy ny referansa:
famaritana - jereo ny Fikarohana momba ny fikarohana sy famerenana ny famerenana amin'ny laoniny ho an'ny famaritana bebe kokoa
Allele - endrika iray hafa amin'ny gene izay mipoitra amin'ny mutation ary hita amin'ny toerana mitovy amin'ny chromosome. Afaka tonga ihany koa i Alleles amin'ny alàlan'ny fifindra-monina avy amin'ny mponina hafa.
Genètes - zanatany niforona tamin'ny fananahana ara-nofo izay miavaka amin'ny fototarazo. Ny zanatany haran-dranomasina miavaka dia maneho karazana iray (amin'ny ankamaroan'ny tranga), fa raha misy ny fiterahana, dia mety ho zanatany iray ihany ny zanatany maro, ary ramets no iantsoana azy ireo.
Ramets - zanatany namboarina tamin'ny fanabeazana aizana tsy mitovy.
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny fototarazo - ny mety hitrangan'ny alelà santionany roa tsy mitovy. Izany dia maneho ny halehiben'ny fahasamihafana eo amin'ny fototarazo eo amin'ny fototarazo amin'ny mponina iray.
Ny fahasamihafana misy ny Genotypic - ny fitovian'ny fototarazo ao anatin'ny mponina iray. Satria ny vatohara dia afaka mamokatra amin'ny fomba tsy ara-nofo, zanatany maro (na ramets) dia mety an'ny genet iray ihany ary noho izany ny fahasamihafana amin'ny genotypic dia mety latsaky ny isa zanatany)
Fihetseham-po ara-pananahana mifandray amin'ny famerenana amin'ny laoniny
Ny fahasamihafana ara-pirazanana sy ny genotypika ny vatohara voaverina amin'ny laoniny dia tokony hojerena foana rehefa manao famerenana amin'ny laoniny amin'ny fomba fambolena haran-dranomasina. Ireo fomba ireo dia manararaotra ny fizarazaran-tena tsy mitovy amin'ny firaisana, mamorona zanatany izay mitovy amin'ny génétietika (izany hoe ramets izay an'ny génétière ihany). Raha ambany ny fahasamihafana misy ny genotypika amin'ny toerana anaovana famokarana mandritra ny fiterahana ho an'ny fiterahana, dia atahorana ny mponina satria ny fahasamihafan'ny génotypique ambany dia mety hitarika amin'ny fahombiazan'ny zezika.
Mampiditra Genetika amin'ny famerenana amin'ny laoniny
Mba hampihenana ireo risika ireo dia tokony mikendry ny kolontsaina sy ny famoahana génétique araka izay tratra ny mpikarakara zaridaina haran-dranomasina. Ireto takelaka manaraka ireto dia misy fampahalalana momba ny fomba fampidirana ireo fampahalalana momba ny fototarazo amin'ny lafiny maro amin'ny fomba fanaovana zaridaina haran-dranomasina ho an'ny famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina.
Angony ny garan-dranomasina 3-6 isaky ny haran-dranomasina avy amin'ny faritra haran-dranomasina miaraka amin'ny toe-piainana iainana isan-karazany, anisan'izany ireo faritra izay maka tahaka ny fepetra ho avy
Mba hisamborana ny ankamaroan'ny (> 50%) an'ny alleles adaptive eo an-toerana (alleles izay nanome coral ny fahaizany mivoatra amin'ny tontolo misy azy ankehitriny), manangona avy amin'ny genetika 3 farafahakeliny tranokala iray omena, na haran-dranomasina; raha te hisambotra 90%, manangona amin'ny généta 10 (Baums et al. 2019).
Ny zanatany mpamatsy vola (avy amina angonina ny haran-dranomasina) dia tokony ho mihoatra ny 5m ny elanelam-potoana misy azy ary ampiasaina amin'ny genotyped amin'ny alàlan'ny fomba gazy molekiola raha azo atao.
Ny haran-dranomasina dia tokony hangonina amin'ny alalàn'ity metodôlika ity, avy amin'ny karazam-borona amoron-dranomasina misy fahasamihafana eo amin'ny tontolo iainana eo an-toerana, ho an'ny karazana génétique 20-25 isaky ny karazana famokarana isaky ny akanin-jaza.
Ramets (sombin-haran-dranomasina) mitovy karazana maniry amin'ny firafitry ny akanin-jaza. Loharano: Coral Restauration Foundation. Sary © Tim Calver
Ny haran-dranomasina dia tokony harahina arakaraka ny fotoana mifototra amin'ny génétiota na razana. Izany dia azo atao amin'ny alàlan'ny fananganana genet iray isaky ny firafitry ny akanin-jaza na amin'ny fampiasana tag na plugs / pucks miaraka amin'ny genet Ny toerana iray ho an'ny "genotypes tsy fantatra" dia tokony ho voatendry ho an'ireo zanatany izay vaky na lasa mivadika ary tsy fantatra ny fototarazony. Ireo zanatany ireo dia mbola azo ovaina amin'ny fahafantarana fa tsy fantatra ny génet. Raha tsy misy angon-drakitra molekiola misy, dia azo aseho ny tsipika misy karana tsy manam-paharoa mifanaraka amin'ny zanatany mpamatsy vola.
Ny toetra Phenotypic izay afaka manampy amin'ny torolàlana ny haran-dranomasina dia tokony hanohy hanaparitaka azy: "), Famonoana poizina sy fanoherana ny aretina azo avy amin'ny tsimokaretina (tsy misy aretina mihosin-dra / areti-mifindra, taham-pivoarana miadana ny aretina, ary / na fanarenana haingana), ary vokatra avo lenta amin'ny fiterahana (fananahana sy tsiranoka tsirinaina) (Baums et al. 2019).
Ny génétiè izay mampiseho tsy fahasalamana tsara ao amin'ny akanin-jaza dia azo soloina hafa avy amin'ny vatohara iray ihany (Baums et al. 2019). Ny fanilihana ireo zanatany ireo avy amin'ny akanin-jaza dia mety tsy hisy fiantraikany amin'ny fanehoana ny fahasamihafana ara-pirazanana raha mbola mitazona ny solontena avy amin'ny karazan-trano samihafa. Ireo tavela amin'ny génétique namboarina ho solony dia mbola azo apetraka mivantana (jereo eto ambany).
Mivoaha fampisehoana mitovy amin'ny genetika rehetra avy amin'ny tahiry akanin-jaza isaky ny tranokala (Baums et al. 2019)
Ny famoahana gèère 4-6 isan-karazany eo akaiky eo mba hampitomboana ny fahafaha-miteraka fiterahana ara-nofo mahomby dia hanampy amin'ny fametrahana mponina maharitra.
Mety misy karazana gètre sasany mety tsy mifanaraka amin'ny garderie nefa mifanaraka tsara amin'ny haran-dranomasina; amin'ireny tranga ireny, ny mpitsabo iray dia afaka mihevitra ny fanafoanana ny sehatry ny akanin-jaza sy ny famoahana azy mivantana avy eo amin'ny zanatany ka hatrany amin'ny haran-dranomasina. Ny génet dia azo tazonina ao amin'ny akanin-jaza ihany na eo aza ny tsy fahombiazan'ny asa raha toa ny fanaraha-maso ny toerana ivelan'ny toeram-pitrandrahana dia manondro fa mpilalao avo lenta izy io (O'Donnell et al. 2018).
Fomba genetika marolekiola maromaro no misy hamaritana raha isan-karazany ny haran-dranomasina any amin'ireo akanin-jaza, ary koa handrefesana ny fahasamihafana misy eo amin'ny fototarazo sy ny firafitry ny mponina (Baums et al. 2019). Ny fomba fiasa roa ampiasaina matetika dia misy:
Ireo mari-pamantarana mikraosialy - manadihady ny isan'ny antony (averina tsiroaroa)
Marika marobe sahady no efa novolavolaina ho an'ny haran-dranomasina Karaiba sy Symbiodiniaceae (Baums et al. 2019)
Tombontsoa: malefaka amin'ny isan'ny santionany azo tanterahina; kely ny rakitra data; mahitsy ny fandalinana ny fototarazo
Fahavoazana: miasa mafy ny famonoana loci maro, sarotra ny mandeha ho azy ny fanaovana scolaires, tsy azo oharina amin'ny laboratoara mora foana ny valiny
Polymorphism nukleotide tokana (SNPs) - manadihady ny tsy fitovizan'ny mpivady tokan-tena amin'ny filaharana génome
Tombony: mora kokoa ny mandeha ho azy sy manome outsource, maro ny loci azo zahana amin'ny fotoana iray hanomezana vaovao momba ny genome; ny fomba azo averina amboarina kokoa eo amin'ny laboratoara; ny fomba mifototra amin'ny filaharana dia tsy mila fampandrosoana sehatra ary azo ampiharina avy hatrany amin'ny karazana rehetra.
Drawbacks: ny famakafakana dia mitaky fahaiza-manao bioinformatika mba hahazoana genotypes amin'ny famoahana ny filaharana.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoVondron'orinasa voajanahary amin'ny famerenana amin'ny laoniny Coral Restauration
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoBaums et al. 2019: ny fiheverana amin'ny fampitomboana ny mety ho fetran'ireo vondron-dranomasina naverina amin'ny laoniny any Atlantika Andrefanamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFitsidihana Jeneraly Famerenana amin'ny laoniny ho an'ny fiarovana ny haran-dranomasinamanokatra fisie PDF
Webinar: Fampitomboana ny fahafaha-mampifanaraka ny isan'ny haran-dranomasina naverina tamin'ny laoniny
Webinar: Fikarohana sy famerenana amin'ny laoniny ny génétique coral